GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
A gwara Ebreham ka ọ chụọ Aịzik n’àjà (1-19)
A ga-esi n’aka nwa Ebreham gọzie mba niile (15-18)
Ezinụlọ Ribeka (20-24)
22 Mgbe ihe ndị a mechara, ezi Chineke nwalere Ebreham.+ Ọ kpọrọ ya òkù, sị: “Ebreham!” ya azaa ya, sị: “Lee m!” 2 Chineke wee sị ya: “Biko, kpọrọ Aịzik+ nwa gị nwoke, otu mkpụrụ nwa ị mụrụ, onye ị hụrụ n’anya nke ukwuu,+ gaa n’ala Moraya.+ Jiri ya chụọ àjà a na-esu ọkụ n’ebe ahụ, n’otu n’ime ugwu m ga-egosi gị.” 3 Ebreham wee bilie n’isi ụtụtụ dokwasị ihe e ji anọ ọdụ n’elu jakị ya, kpọrọ mmadụ abụọ n’ime ndị na-ejere ya ozi, kpọrọkwa Aịzik nwa ya. Ọ wara nkụ ọ ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ. O biliziri gawa n’ebe ahụ ezi Chineke gwara ya. 4 N’ụbọchị nke atọ, Ebreham leliri anya ma nọrọ n’ebe dị anya hụ ebe ahụ ọ na-aga. 5 Ebreham sịrị ndị na-ejere ya ozi: “Unu na jakị a nọrọ ebe a ka mụ na nwa m nwoke gaa n’ebe ahụ fee Chineke. E mechaa, anyị ga-alọghachikwute unu.” 6 Ebreham wee bo Aịzik nwa ya nkụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ ma were ọkụ* na mma, ha abụọ esoro na-aga. 7 Aịzik wee sị Ebreham nna ya: “Nna m,” ya azaa ya, sị: “Ee, nwa m.” Aịzik wee sị: “Anyị ji ọkụ, anyị bukwa nkụ, oleekwanụ atụrụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ?” 8 Ebreham wee sị: “Nwa m, ọ bụ Chineke ga-eweta atụrụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ.”+ Ha abụọ wee soro na-aga. 9 N’ikpeazụ, ha rutere n’ebe ahụ ezi Chineke gwara ya ka ọ gaa. Ebreham wee rụọ ebe ịchụàjà n’ebe ahụ ma hazie nkụ ahụ n’elu ya. O kere Aịzik nwa ya eriri ụkwụ na aka ma kukwasị ya n’elu nkụ ahụ o dokwasịrị n’ebe ịchụàjà ahụ.+ 10 Ebreham matịziri aka were mma ahụ ka o gbuo nwa ya.+ 11 Ma mmụọ ozi Jehova si n’eluigwe kpọọ ya òkù, sị: “Ebreham, Ebreham!” ya azaa ya, sị: “Lee m!” 12 O wee sị ya: “Emerụla nwa ahụ ahụ́, emekwala ya ihe ọ bụla, n’ihi na amatala m ugbu a na ị na-atụ egwu Chineke ebe ọ bụ na ị jụghị inye m nwa gị nwoke, bụ́ otu mkpụrụ nwa ị mụrụ.”+ 13 Ebreham wee lelie anya hụ ebule mpi ya konyere n’osisi. Ebreham gara kpụrụ ebule ahụ, jiri ya chụọ àjà a na-esu ọkụ kama ịchụ nwa ya nwoke n’àjà. 14 Ebreham kpọrọ ebe ahụ Jehova-jaịre.* Ọ bụ ya mere a ka ji ekwu ruo taa, sị: “Jehova ga-eweta ihe ndị a chọrọ n’ugwu ya.”+ 15 Mmụọ ozi Jehova wee si n’eluigwe kpọọ Ebreham òkù nke ugboro abụọ, 16 sị: “Jehova sịrị, ‘Eji m onwe m na-aṅụ iyi+ na ebe ọ bụ na i mere ihe a, ị jụghịkwa inye m nwa gị nwoke, bụ́ otu mkpụrụ nwa ị mụrụ,+ 17 n’eziokwu, m ga-agọzi gị. N’eziokwu, m ga-eme ka ụmụ* gị dị ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe nakwa ka ájá dị n’ụsọ oké osimiri.+ Nwa* gị ga-ewegharakwa obodo* ndị iro ya.+ 18 M ga-esi n’aka nwa* gị+ gọzie mba niile dị n’ụwa n’ihi na i gere m ntị.’”+ 19 Mgbe e mechara, Ebreham laghachikwutere ndị na-ejere ya ozi. Ha wee bilie soro Ebreham laghachi Bia-shiba,+ birikwa n’ebe ahụ. 20 Mgbe ihe ndị a mechara, e ziri Ebreham ozi, sị: “Milka amụọkwarala Nehọ nwanne gị nwoke ụmụ ndị nwoke:+ 21 Nwa nke mbụ bụ Ọz. Nke na-eso ya bụ Bọz, ndị nke ọzọ abụrụ Kemuel (nna Eram), 22 Kised, Hezọ, Pildash, Jidlaf, na Betuel.”+ 23 Betuel bụ nna Ribeka.+ Ọ bụ mmadụ asatọ ahụ ka Milka mụụrụ Nehọ nwanne Ebreham. 24 Ruma, bụ́ iko nwaanyị Nehọ, mụkwaara Nehọ ụmụ nwoke. Ha bụ: Tiba, Geham, Tehash, na Meaka.
^ O nwere ike ịbụ icheku ọkụ ka a na-ekwu.
^ Jehova-jaịre pụtara “Jehova Ga-eweta; Jehova Ga-ahụ Maka Ya.”
^ Ma ọ bụ “nwa.” Na Hibru, “mkpụrụ.”
^ Na Hibru, “ọnụ ụzọ ámá.”